Soo dejisan Hearthstone 3.0.9791 – Android – Vessoft
Hearthstone – kulan collectible card abuuray oo ku saleysan caalamka Warcraft ah. Ayaa dhowr characters halyeeyga la kartida qof ahaaneed iyo ururinta card u gaar ah oo balaadhinaya intii ay ciyaarta socotay, waxaa laga heli karaa in ciyaaryahanka. Hearthstone ku jira qaabab badan oo ay ka mid yihiin gameplay tartamada oo la ciyaartoyda kale, shakin in ay saaxadda iyo maris ah adventures la heli karo dhib kala duwan. Bilowga ciyaartoyda xisbiga heli dhowr kaararka random kharashka Mana kala duwan si ay u isticmaalaan iyo aad u hesho kaar cusub iyo kiristaalo Mana inuu u dhaqaaqo kasta oo cusub. Hearthstone ayaa kaarar badan oo la muuqaalada iyo astaamaha kala duwan oo si weyn u bedeli kartaa koorso ee ciyaarta. Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale fulinta shaqo kala duwan qaata oo dahabka ah oo oo ay suurogal tahay in ay soo iibsadaan ah nooc dhamaystiran oo kaararka ama helaan garoonka.
The set oo ah habab iyo xeelado guul
Hababka kala duwan gameplay
Tirada badan ee kaararka
Tartanka ee qiimeynta ciyaaryahanka ugu fiican ku